डन्डीफोरले अनुहार बिग्रियो ? यी उपाय अपनाउनुहोस्सुन्दर देखिने – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/डन्डीफोरले अनुहार बिग्रियो ? यी उपाय अपनाउनुहोस्सुन्दर देखिने
डन्डीफोरले अनुहार बिग्रियो ? यी उपाय अपनाउनुहोस्सुन्दर देखिने
चाहना सबैको हुन्छ। तर, सुन्दर र चम्किलो छाला भन्नेवित्तिकै कहाँ बनाउन सकिन्छ र। अझ अनुहारमा आउने अत्याधिक डन्डीफोरले त अनुहारलाई कुरुप नै बनाइदिन्छ। सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ। डन्डीफोरबाट छुटकारा दिलाउने केही घरेलु उपाय यस्ता छन्।
छोपियो सुन्दरता, बदलियो पोसाक
नेपालमा कोरोना अपडेट : हालसम्मकै उच्च संख्यामा थपिए संक्रमित, कहाँ कति ?(विवरणसहित)
दुःखद खबर; टेक्सासमा २३ वर्षीय नेपाली विद्यार्थी प्रमोद भट्टराईको संकासमक, अवस्थामा नि’धन
एक रुपैयाँ दान अभियानले प्रियंका बचाउने आशा जाग्यो, सहयोगी मनसम्म पुर्याउन सेयर गरौँ